IBravo: Fota ubungqina beVidiyo kwi-Intanethi | Martech Zone
NgoLwesine, Aprili 26, 2012 NgeCawa, ngoSeptemba 8, 2013 Douglas Karr
Iindawo ezininzi ziya kuxhamla kubungqina bevidiyo okanye ukubeka iphepha apho abathengi banokurekhoda umyalezo wevidiyo kwinkampani. Nangona kunjalo, ukufaka, ukulayisha kunye nokusingatha ezo vidiyo kunokuba yintlungu. Bravo Ndiyathemba ukutshintsha loo nto ngenkonzo yabo entsha, ukuvumela abathengi bakho ukuba barekhode ngekhamera yabo yewebhu kwaye bayisingathe kwiphepha lokufika ngokwesiqhelo lakho!
Nalu ushwankathelo lwenkonzo:
Nantsi inkonzo ichazwe yindawo yeBravo:
Senza elakho iphepha lokufika kwevidiyo -I-Video Portal yethu esebenziseka lula inika uphawu lwakho kwaye yenza abaphulaphuli bakho bazi ukuba ungathanda ukuba bathini.
Abaphulaphuli bakho barekhoda iividiyo zabo ezinemizuzwana engama-30 -Abathengi bakho okanye amathemba akho anokuyirekhoda kwangoko imiyalezo yabo, izimvo okanye imibuzo ngemizuzwana besebenzisa i-webcam yabo.
Jonga kwaye wabelane ngeevidiyo zakho naphi na kwiwebhu -Sasaza impembelelo yakho entsha kwiwebhusayithi yakho okanye kwimidiya yoluntu. IBravo ikuvumela ukuba uqale ngokwenza iwebhusayithi yakho, imizuzwana engama-30 ngexesha.
tags: ubungqina babathengiukuhlolwa kwemvelisoIvidiyo eyenziwe ngumsebenzisi
Kutheni ungazi ukuba ndingubani?
Meyi 1, 2012 kwi-4: 36 AM
Ezi zithuba ziluncedo
Meyi 7, 2012 kwi-8: 29 PM
Kubonakala ngathi ukhuphiswano kubungqina bevidiyo yomthengi luyafudumeza. Ndifumene inqaku kwinkonzo entsha, ebizwa iCrowdrave enikezela ngenkonzo efanayo.